Umakhi wezinto ze-Tin Pet zokudla, I-Wholesale for Packaging
Imikhiqizo yokuqukatha ye-Bucket PVC Tin
I-Tin Pet Food Container ibaluleke kakhulu ekugcineni ukudla kwesilwane esomile. Ukudla kwesilwane esomile kuyindlela enhle kakhulu yokuphekela injana yakho usuku lonke ngoba ngeke konakale namuhla lapho ushiya isidlo sayo kusuka ekuseni kuze kuhlwe.
I-Bucket yangokwezifiso ze-White White ngeHandle futhi Ilahlekile Ukudla Kwezilwane Zasekhaya
Amabhuthi we-Mini Pet Tin Pail Onesibambo Ngokupakishwa Kwezipho
Kungani iTin Pet Food Container ibalulekile?
Isitsha Sokudla se-Tin Pet kubaluleke kakhulu ekugcineni ukudla kwesilwane esomile. Ukudla kwesilwane esomile kuyindlela enhle kakhulu yokuphekela injana yakho usuku lonke ngoba ngeke konakale namuhla lapho ushiya isidlo sayo kusuka ekuseni kuze kuhlwe. I-canine yakho ithanda ukuqunjwana ku-kibble entsha, futhi uma usuvule isikhwama esisha sha se-kibble, ukudla kungashesha ukumisa noma, okubi kakhulu, kuthuke uma kugcinwe ngokungalungile. Ngakho-ke ungakugcina kanjani ukudla kwesilwane esomile? Manje uzodinga iziqukathi zokudla kwezilwane ezifuywayo.
Ukugcina ukudla kwe-canine eyomile ngokuphelele uma uvula isikhwama, kuhle kakhulu ukonga ukudla kwesilwane ngaphakathi kwesikhwama sokuqala ngaphakathi kwesitsha sokudla kwesilwane, ingilazi noma isitsha se-aluminium engasindi.
Funa iziqukathi zokudla kwezilwane ezihamba ne-gasket enjoloba phezu kwesembozo ukuze umoya ungangeni kahle kanye nomswakama kokudla. Lezi zinhlobo zeziqukathi zizogwema umoya, umswakama, kanye nezinambuzane ukuthi zingangeni ekudleni futhi zikuchithe.
Ukugcina ukudla ngaphakathi kwesikhwama sokuqala ngaphakathi kwezitsha zokudla ze-tin pet. inika isendlalelo esingeziwe sokuphepha ukuze siyigcine sinambitha kakhulu kumngane wakho omnandi, kuphakamisa uPetMD. Kuvikela nokudlulisela ukunambitheka kusuka esitsheni kuya kokudla futhi okuphambene nalokho.
Ungakugcini ukudla ngaphandle ngenxa yokushintshashintsha kwezinga lokushisa kanye nosongo lwezilokazane ezinjengezinambuzane, amagundane, ngisho nezilwane ezingaphandle. Uzofisa ukukugcina ngaphakathi kwekhaya lakho ezingeni lokushisa elingu-22 degrees Celsius noma ngezansi, kweluleka Ukushicilelwa Kokuphepha Kokudla.
Ukuze uthole ukusha okuphezulu kanye nokuthanda, sebenzisa isikhwama kungakapheli amasonto ayisi-6 usivulile futhi ubuye uhlole usuku “oluhamba phambili” ukubheka ukuthi lusephakeme yini futhi alukwedluli ngalolu suku.